Filimada jaceylka - Wikipedia
Tyrone Power ayaa si xamaasad leh u soo dhaweysay Alice Faye filimkii 1938 ee Alexander's Ragtime Band.
Filimada jaceylku waa sheekooyin jacayl oo jacayl ah oo laga duubay warbaahinta muuqaalka ah oo laga sii daayo tiyaatarada iyo TV-ga kuwaas oo diirada saara xamaasada, shucuurta, iyo jacaylka kalgacalka leh ee jilayaasha waaweyn iyo safarka uu jacaylkoodu ku marayo haasaawaha ama guurka.
Filimada jaceylka ah ayaa sheekada jaceylka jaceylka ka dhigaya ama raadinta jacayl adag oo saafi ah iyo jacayl ujeedka ugu weyn ee diiradda. Mararka qaarkood, jacaylka jacaylku waxay la kulmaan caqabado sida dhaqaale, jirro jireed, noocyo kala duwan oo takoor ah, xakameyn nafsaani ah ama qoys u hanjabaya inuu jabiyo midowga jacaylka. Sida ku jirta dhammaanba xiriirro jacayl oo adag, qoto dheer, iyo xiriir sokeeye, xiisadaha nolol maalmeedka, jirrabaadda (gaalnimada), iyo kala duwanaanshaha iswaafajinta waxay galaan qorshooyinka filimada jacaylka.
Filimada jaceylka badanaa waxay sahamiyaan mowduucyada lama huraanka ah ee jaceylka aragtida koowaad, da 'yarta jacaylka duugga ah, jaceylka jaceylka aan lagaran karin, jaceylka waswaaska ah, jacaylka shucuurta, jaceylka ruuxi ah, jaceylka xaaraanta ah, jaceylka qaawan, jacaylka galmada iyo qiirada leh, jaceylka huraha ah, jacaylka qarxa iyo wax burburka, iyo jacayl naxdin leh. Filimmada jacaylka ahi waxay u noqdaan kuwo ka baxsada iyo khiyaali u ah daawadayaasha, gaar ahaan haddii labada qof ay ugu dambayntii ka adkaadaan dhibaatooyinkooda, oo ay jacaylkooda caddeeyaan, oo ay nolosha la kulmaan "farxad weligoodba ha ahaatee", taas oo macnaheedu yahay isu keenid iyo dhunkasho kama dambays ah. Taxanaha telefishanka jaceylka, horumarinta xiriirada noocaas ah ee jaceylka waxaa laga yaabaa iney ku ciyaaraan qaybo badan ama jilayaal kaladuwan ayaa ku dhex milmi kara armaajo kala duwan.
↑ Romance films
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Filimada_jaceylka&oldid=222111"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 29 Oktoobar 2021, marka ee eheed 06:54.